Ogaden News Agency (ONA) – Dalka Yaman: Macaluul iyo gaajo marti ma isu noqdeen !
Dalka Yaman: Macaluul iyo gaajo marti ma isu noqdeen !
Posted by ONA Admin	/ April 18, 2015
Saxafi Axmad Cabdi oo Xog-ogaalnimo uga warbixinaya xaaladda nololeed ee ka jirta Yemen, gaar ahaan nolosha adag ay la kulmeen qaxootigii Somaliyeed ee wadankaasi horey usii joogtay.
Duqeymaha cirka ee ay diyaaradaha xulafada Carbeed ee uu hormoodka u yahay Sacuudigu iyada oo ay galeen todobaadkii 4-aad ayaa waxa la sheegayaa in ka badan 6 boqol oo shacab ah in ay ku naf waayeen dagaalada, halka kumanaan kale oo ku dhaawacmay ay dhakaatiirtu la daalaadhacayso daaweyntooda.
Si kastaba ha ahaate, Waxa aan la ogeyn in UNHCR ay sii wadi doonto in ay dabarto cunno siinta dadka Al-Qaras ugu xaraysan oo hadda 20 kun oo qoys ah iyo in kale. Walow ay Afhayeenka hay’ada Melissa Fleming ay ii sheegtay in ay taas u siimari doonto hay’adaha maxaliga ah in ay xaqiijiyaan helida biyo, baad iyo dawooyinka ay u baahan yihiin.